Uphando / i-gis -Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Uphando / gis
Uphando / i-GIS>
Ulwakhiwo / iMigodi>
Ukhenketho / izakhiwo zakudala ukhuseleko>
Ezomkhosi / zamaPolisa>
Zithini iikhamera ze-oblique ezisetyenziselwa uphando kunye ne-GIS
Kutheni usebenzisa iikhamera ze-oblique kuPhando lwe-GIS
Zithini izibonelelo zeekhamera ze-oblique kuphando kunye ne-GIS
Iifoto ezithathwe ziikhamera ze-oblique zivelisa ukusonjululwa okuphezulu kunye neenkcukacha zeemodeli ze-3D zeendawo ekumgangatho osezantsi, ophelelwe lixesha okanye ongenayo nedatha. Ngenxa yoko zenza ukuba iimephu ze-cadastral ezichanekileyo ziveliswe ngokukhawuleza nangokulula, nokuba kunzima okanye kunzima ukufikelela kwimeko. Abavavanyi banokuphinda bakhuphe amanqaku kwimifanekiso, njengemiqondiso, ii-curbs, iziphawuli zendlela, imibhobho yamanzi kunye nemijelo yamanzi.
I-3D GIS ibhekisa ku: 1) Idatha inoluhlu olutyebileyo
I-3D GIS ibhekisa ku: 2) Uluhlu ngalunye lolawulo olujolise kwinto
I-3D GIS ibhekisa ku: 3) Into nganye ineevectors kunye neempawu zemodeli ye-3D
I-3D GIS ibhekisa ku: 4) Ukukhutshelwa okuzenzekelayo kweempawu ezizizo
Zithini izibonelelo zeekhamera ze-oblique kuphando kunye ne-GIS?
Ukuphanda kunye nokwenza imephu kunye neengcali ze-GIS zijike ngokukhawuleza kwizisombululo ezingenamntu kunye ne-3D zokwenza umsebenzi ngcono. Iikhamera zeRainpoo oblique zikunceda ukuba:
(1) Gcina ixesha. Inqwelomoya enye, iifoto ezintlanu ezivela kwii-engile ezahlukeneyo, zichitha ixesha elincinci ebaleni ziqokelela idatha.
(2) Biyela ii-GCPs (ngelixa ugcina ukuchaneka). Ukufezekisa ukuchaneka kwebanga lophando kunye nexesha elincinci, abantu abancinci, kunye nezixhobo ezincinci. awusayi kuphinda ufune amanqaku olawulo lomhlaba.
Funda ukusebenzisa ikhamera ye-oblique ukwenza uphando / imephu / i-GIS isebenza ngaphandle kwe-GCPs>
(3) Cofa ixesha lakho lokuqhubekeka.Isoftware yethu ekrelekrele exhasa kakhulu ifoto (i-Sky-Filter), kwaye iphucula kakhulu ukusebenza kwe-AT, ukunciphisa iindleko zokumodareyitha, kunye nokuphucula ngakumbi ukusebenza kwawo wonke umsebenzi (Ukujongwa kwesibhakabhaka).
Funda ukuba isoftware exhasayo ikunceda njani ukugcina ixesha lokwenza umsebenzi emva kwexesha. >
(4) Hlala ukhuselekile Sebenzisa iidrones kunye neekhamera ze-oblique ukuqokelela idatha ngaphezulu kweefayile / izakhiwo, kungekuphela nje kunokuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi, kodwa nokhuseleko lweedrones.